Osaka no Kaominina Voalohany Ao Japana Nankasitraka ny Fitaizan’ny Pelaka · Global Voices teny Malagasy
Tamin'ny 6 Aprily 2017, nanjary kaominina voalohany tao Japana nankasitraka ny fiarahan'olon-droa mitovy taovam-pananahana tahaka ny ray aman-dreny ny tanànan'i Osaka.
Voadika ny 19 Avrily 2017 12:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, русский, English
Saina Avana Fireharehana Tokyo 2012. Saripikan'i Lauren Anderson mpisera Flickr . Zon'ny mpamorona: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0).
Tamin'ny 6 Aprily 2017, nanjary kaominina voalohany tao Japana nankasitraka ny fiarahan'olon-droa mitovy taovam-pananahana afaka hitaiza zaza ny tanànan'i Osaka. Nitranga ny fanovana politika raha nankasitraka ireo lehilahy roa tsy te hitonona anarana, ho mpitaiza ny tovolahy izay nokarakarain'izy ireo nanomboka tamin'ny volana Febroary ny tanàna.
Hatramin'ny fanapahan-kevitr'i Osaka tamin'ny Aprily, ireo mpivady na tsirairay ihany no afaka nitaiza zaza ao Japana, na dia eo aza ny zava-misy fa tena mila ray aman-dreny mpitaiza sy manangan-jaza ny firenena. Tamin'ny Marsa 2017, ankizy farafahakeliny 46 000 manerana an'i Japana no nokarakarain'ny fanjakana noho izy ireo na namoy ray aman-dreny na nitsoaka tany an-tranony noho ny fihoaram-pefy. Monina amin'ny trano fitaizana ankizy ny ankamaroan'ireo ankizy ireo; Ny 10% ihany no taizan'ireo ray aman-dreny mpitaiza.
Taorian'izany fanapahan-kevitra manan-tantara izany, Nalaza tao amin'ny Twitter ny teny hoe (#男性カップル, dansei kappuru manondro ny lehilahy roa mitokan-trano). Nanangona ireo sioka sasany tao anaty lahatsoratra bilaogy i Naver Matome, bilaogera ao amin'ny “Grade Up” (グレードアップ). Toa amin'ny lafiny tsara ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra momba ny fanapahan-kevitry ny tanànan'i Osaka mikasika izany mpitaiza izany:
Sioka: Lehilahy roa mitokan-trano no nomen'ny kaominin'i Osaka alalana ho mpitaiza. Raha misy mpifankatia te hitaiza ankizy nampijalian'ny ray aman-dreniny niteraka azy ireo, tsy maninona na izy ireo mpivady mitovy taovam-pananahana na tsia.
Lahatsoratra: “Raha tianao mihoatra ny rehetra ireo ankizy taizanao, na ray aman-dray iana na reny aman-dreny na ray aman-dreny, ny zava-dehibe dia ny maha raiamandreny”.
Mbola tsy nankatoavina ao Japana ny fanambadian'ny olona roa mitovy taovam-pananahana. Satria ny Andininy faha-24 amin'ny lalàmpanorenan'i Japana dia ahitana andinin-teny hoe: “Tokony hifototra amin'ny fifankatoavan'ny roa tonta samy hafa taovam-pananahana ny fanambadiana”, izay sokajiana ho sakana amin'ny fanambadian'ny olon-droa mitovy taovam-pananahana hatramin'izao.
Manana andraikitra lehibe amin'ny fanarahamaso sy fitantanana ny zo aman-dalànan'ny fianakaviana ireo kaominina ao Japana, anisan'izany ny fanambadiana, ny tokantranomaso, ny fananganan-jaza sy ny fitaizana zaza. Nisy ireo kaominina sasany ao Japana nandany ny didy hitsivolana ao an-toerana izay mankatoa ny fiarahan'ny mpifankatia mitovy taovam-pananahana, izay mampitovy izany fiarahana izany amin'ny mariazy.
Narahan'ny lohahevitra mahazatra ny fanapahan-kevitr'i Osaka – izay misy ireo olona sasany tsy mankasitraka, saingy ny tena zava-dehibe dia ny ankizy mila tiavina:
Raha mahita sioka manafangaro ny fitaizan-jaza ataon'ny ray aman-dreny pelaka amin'ny fanangana-janka, tiako ny manoritra fa ny fitaizana dia hatramin'ny faha-18 taonan'ny (zaza) ihany. Tsy voasoratra anarana ao amin'ny lisi-pianakaviana ny zaza notaizana (noho izany, tsy ankatoavina ara-dalàna ho anisan'ny fianakaviana ao Japana).
Na izany aza, mino aho fa tokony ho anatin'ny fianakaviana be fitiavana ny ankizy, na izany ray aman-dreny lehilahy na ray aman-dreny vehivavy, mandra-pahatonga ny faha-18 taonan'ny ankizy.
Marobe ireo hevitra milaza fa noho ny fanapahan-kevitr'i Osaka hankatòa ny mpifankatia mitovy taovam-pananahana hitaiza dia tokony hitserana ny ankizy. Na izany aza, mihevitra aho fa na iza na iza tezain'ny lehilahy roa dia hilaza indray andro any fa nanana fiainan-tsambatra (tamin'ny fahazazana). Tsy maninona izay lazain'ny olona, ny tena zava-dehibe dia notaizana am-pitiavana ny ankizy. Tsy misy olona tokony hanesoeso (ireo ankizy tinaizan'ny mpifankatia mitovy taovam-pananahana).
Taorian'ny fanambaran'ny tanànan'i Osaka, nalaza tao amin'ny twitter ihany koa ny teny “mofon-tsôkôlà” (チョコレートドーナツ) – lohatenin'ny sarimihetsika Any Day Now [Izay andro rehetra ankehitriny] amin'ny teny Japoney nivoaka tamin'ny taona 2012, izay milaza tantarana mpifankatia pelaka miady mangina hitaiza tanora mitondra karazan-tsela tsy mahazatra (trisomie 21) :
Hatramin'ny naha lasa lohahevitra malaza,ny ray aman-dreny pelaka mitaiza zaza, dia mandrisika ny fijerena ny ‘Any Day Now’ [Izay andro ankehitriny] aho. Tantarana lehilahy roa nitaiza tanora mitondra karazan-tsela tsy mahazatra. Na izany aza, satria pelaka ireo lehilahy roa ireo, noesorina tamin'izy ireo ilay ankizilahy. Tsy nijanona teo anefa izy ireo fa nitolona mba ho afaka hikarakara ilay ankizilahy. Tena mahavaky fo tanteraka izany ary mandrisika ny tsirairay aho hijery izany.
Naneho hevitra momba ny fanapahan-kevitry ny tanànan'i Osaka ihany koa ny kaonty Twitter izay nampalaza ny fivoahan'ny sarimihetsika tao Japàna:
Somary gaga izahay raha nahita ny vaovao, ary raha nanomboka nalaza tao amin'ny Twitter ny ‘Izay andro ankehitriny’ dia taitra ihany koa izahay.
Eny tokoa, tsara kokoa raha mahita fahasambarana miaraka amin'ny ray aman-dreny niteraka azy ireo ny ankizy. Kanefa rehefa tsy azo atao izany, tsy maninona raha misy olona afaka manome fitiavana sy tambitamby ilain'ny ankizy.